Al-Shabaab oo lagu dilay howlgal ka dhacay Jubbada hoose – idalenews.com
Al-Shabaab oo lagu dilay howlgal ka dhacay Jubbada hoose
-Ugu yaraan Saddex xubnood oo ka tirsanaa kooxda nabad diidka Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar xagga Cirka ah oo xalay ka dhacay Tuulada Bangeeni oo 8 KM dhanka galbeed kaga beegan Degmada Jamaame ee Gobbolka Jubbada hoose.
Duqeyntan oo ay geysteen Diyaaradaha dagaalka Maraykanka ayaa lala beegsaday Mooto Bajaaj ay saarnaayeen Shan Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab,halka labada kalana ay ku dhaawacmeen weerarka, kuwaas oo kusii jeeday Degmada Jamaame.
19-Kii Bishan ayay ahayd markii ay Diyaaradaha dagaalka Mareykanka duqeyn ka geysteen meel ku dhow Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe, halkaasoo ay ku dileen Malleeshiyaad ka mid ahaa Al-Shabaab.
Ciidanka Milliteriga Soomaaliya qaybta Danab iyo Xoogagga nabad ilaalinta AMISOM oo kaashanaya kuwa NATO ayaa indhawaalaba howlgallo xagga Cirka iyo Dhulka ah ka waday degaanno ka tirsan koofurta Soomaaliya.
Dalka Jabuuti oo maanta u dareeray doorashada Baarlamaanka